Qalabka loogu talagalay Qalabka Laser ee mashiinnada Goldenlaser - Goldenlaser
Qalabka loogu talagalay ka shaqeynta laser -ka oo leh mashiinnada laser CO2 oo ka socda dahabka
Soo hel dhammaan suurtagalnimada markay tahay goynta laser iyo xardho!
Our mashiinno laser ah oo la soo saaray aad bixiyaan fursado ballaaran for goynta laser oo lagu xardho qalabka kala duwan. Laga soo bilaabo textile ilaa maqaar iyo fiberglass ilaa filim milicsiga.
Goldenlaser waxaa ka go'an inay sahamiso suurtogalnimada wax -ka -beddelka maaddada laser -ka ee warshado kala duwan oo ku lug leh daabacaadda dhijitaalka ah, dharka warshadaha, baabuurta iyo aerospace, dharka, kabaha, dahaarka gudaha iyo qalabka dibadda.
Hoos waxaa ku qoran liiska agabyada la caddeeyay inay ku habboon yihiin ka shaqaynta leysarka, siday u kala horreeyaan xarfaha xarfaha hore. Intaa waxaa dheer, waxaan u abuurnay bogag faahfaahsan qalabka caadiga ah ee laserable, oo aad ka heli karto adigoo gujinaya xiriirinta bogagga faahfaahsan.
Haddii aad haysato qalab takhasus leh oo aad isticmaaleyso oo aad rabto inaad ogaato sida ay uga falcelin doonto goynta leysarka ama xardhan, fadlan nala soo xiriir si aad muunad noogu soo dirto Tijaabinta Maaddada.
Isku-darka Fiber Kaarboon-xoojinta (CFRP)
Maro suuf ah
Foils (Foils Membrane)
Fibreyaasha dabiiciga ah
Filimka Milicsiga (Filimka Wareejinta Milicsiga ee Retro)
Silikoon Maro adag Fabric Heerkulka Sare
Dharka Dabaysha Kulka
Kooxdayada khibrada leh ayaa awood u leh inay kugula taliyaan xalalka ku habboon leysarka ee baahiyahaaga maaddada iyo wax soo saarka.
Buuxi foomka hoose si aad u hesho qeexitaan iyo oraah